कांग्रेस सभापतिमा देउवा दोस्रो पटक निर्वाचित, को हुन् उनी ? - ramechhapkhabar.com
नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा पुन: निर्वाचित भएका छन् । मंगलबार राति सम्पन्न निर्वाचनमा देउवाले कुल २७२४ मत प्राप्त गरेका छन् । दोस्रो चरणमा मंगल भएको मतदानमा खसेको ४५७४ मतमा देउवाले २७२४ मत प्राप्त गरेका हुन् ।
उनका प्रतिद्वन्द्वी डा. शेखर कोइरालाले १८१७ मत प्राप्त गरे । शेखर ९०७ मतअन्तरले पराजित भए । ३३ मत बदर भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।उनी विजयी भएका हुन् । देउवाले सभापतिका अर्का उम्मेदवार शेखर कोइरालालाई पराजित गरेका हुन् ।